Raga Oo Lagu Eedeeyay Ineysan Dumarka Weydiinin Iney Biyo Baxeen Iyo Inkale Xiliga Galmada (Daraasad) - iftineducation.com
iftineducation.com – Machadka Sex Study ee fadhigiisu yahay New York ayaa sheegay in dumarku ay qabaan tabasho badan oo xaga galmada ah.
Warbixinta bilaha ee machahadkaan ayaa lagu sheegay in haweenka ku nool qaaradaha Asia iyo Africa iney ka maqan tahay xaquuq badan oo xaga galmada ah.
Waxaa la sheegay in raga labadaan qaaradood aaney dumarka la hadlin markii ay xaajadooda dhameystaan.
Dumar ka badan 5 kun oo aragti ka dhiibtay daraasad la xirirta heerka cabashada waxa ay sheegeen in ragu ay daneystaan.
“Waxaan la yaabay markii ay biyo baxaan kadib kulama hadlayaan, kuma weydiinayaan inaad biyo baxday iyo inkale waxaana laga yaabaa inaadanba wali kacsan ayey tiri Karlon Cubaew oo ka mid aheyd gabadhihii aftida la weydiiyay.
Sida uu qabo Machadka Sex Study raga waxaa la gudbaan iney dumarka siiyaan codkooda xili ay socoto nolasha sariirta si gaar ah arinta shahwada si hadii aaney gabadhu biyo bixin uu ninku isugu dayo inuu mar labaad caawiyo.
Warbixintu waxaa ay sheegtay in raga kunool wadamada reer galbeedka ay badi fahamsan yihiin qancinta dumarka waxaana cabashadan ay u badan tahay kuwa wali kunool Africa iyo Asia.